Rastrabani.com | मोदीको कस्तो सन्देश बोकेर नेपाल आउँदैछिन् सुष्मा स्वराज ? - Rastrabani.com मोदीको कस्तो सन्देश बोकेर नेपाल आउँदैछिन् सुष्मा स्वराज ? - Rastrabani.com
मोदीको कस्तो सन्देश बोकेर नेपाल आउँदैछिन् सुष्मा स्वराज ?
काठमाडौ १८ माघ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बिहीबार अपराह्न काठमाडौं आउँदै छिन् । वायुसेनाको विशेष विमानमा दुई दिनका लागि आउन लागेकी उनीसँग नवनियुक्त विदेशसचिव विजय केशव गोखले र सहसचिवद्वय सुधाकर दलेला र रबिस कुमार पनि हुनेछन् ।
कतिपयले स्वराजको यो भ्रमणलाई नयाँ सरकार गठनलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण तयारीका रुपमा पनि बुझेका छन् । मोदीले यसअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सिलान्यास गर्ने, जनकपुर र लुम्बिनी भ्रमण गर्ने गरी नेपाल आउने तयारी भएको थियो । तर, नेपालमा वाम गठबन्धन निर्माणसँगै उनको भ्रमण तयारीकै क्रममा रोकिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।